Mogadishu Journal » Ha Ka Yaabin In Laga Helo Xaqsoor Dowladnimo ” Maxaa Loo Diidayaa In Cadaaladda La ilaaliyo?
Ha Ka Yaabin In Laga Helo Xaqsoor Dowladnimo ” Maxaa Loo Diidayaa In Cadaaladda La ilaaliyo?
Soomaalida waxaa soo martay garsoor aan madaxbanaaneyn oo dowladu ay u soo diyaariso xaakimada qaadaya xukunada lagu qaadayo eedeysanayaasha ay madaxda dowladu la maagan tahay ciqaabta. Waxaa taas dhinac socdey garyaqaanada maxkamadaha oo si musuqa ugu shaqeysta awoodooda marka ay qaadayaan dacwadaha oo ay dhacdo dhibanaha iyo eedeysanaha marba kii awood siyaasad ama dhaqaale roonaada inuu ku guuleysto in loo xukumo dacwada. Madaxdii dowlada rayidka iyo kuwa militariga ayaa si toosan iyo si dadban sidey rabaan u maamulaneyey caaqilada maxkamadaha, waxeyna ku caan baxday garsoorka Soomaalida mid lagu fuliyo dhaqanka eexda, aargoosiga, aanada, qabyaaleysiga, caburinta, laaluushka, iyo adeegsiga sharciga marba sida dantu ku jirto.
Dowlada dhalatay 2012, waxey balanqaaday in ay dib-u-habeyn ku sameyneyso sharciyada dalka u degsan iyo guud ahaan hanaanka garsoorka oo ay ka buuxaan qaanuuno laga soo minguuriyey wadamada deriska, Carabta, Talyaaniga, Ruushka, iyo xeerarka dhaqankii hore ee Soomaalida, taas oo dhalisay in madaxda dowladu ay ra’yigooda ka raacdaan. Waxaa muuqata haddii aan la turxaan bixin dastuurka KMG ah oo loo baahan yahay inuu saldhig adag u noqdo dib-u-dhisida sharciyada looga dhaqmayo garsoorka Soomaalida oo lagu dhaqayo Soomaalida, waxey taas horseedeysa guuldarro sababta in madaxdu ay ku sii socoto ra’yiga maskaxdooda sida ay kula quman thay iney wax ku maamulaan. siyaasiyiinta qaar ayaa aaminsan in dhaqanka Soomaaliyeed madaxdu ay ka weyn tahay oo ka sareyso sharciga u degsan dalka, si kasta oo wax loo qorana ay sida badan ku dhamaaneyso cadaalda ay rabaan madaxda Soomaalida. Ragga sidaas u fekeraya waxey ku qaldan yihiin in dhaqanka shaqsiyadu ay noqoto mida laga doorbidayo aragtida ku saleysan fikirka loo rogey sharciga, waxeyna had iyo jeer ku doodaan qoloyinkaas sharcigu inuusan qaldaneyn, laakiin dhaqanka shaqsiyada wax hogaamineysa ayaa si xun u adeegsato qawaaniinta. Tusaale ahaan siyaasiyiintii soo hindisey hab dhaqanka 4.5 oo salka ku hayey aragti shaqsiyadeed, waxey aaminsan yihiin inuu ahaa mid saxan, laakiin aan sidii loogu talagalay aysan madaxdu u dhaqangelin. Habkaas wuxuu noqday xeer ku dhaqmidiisu mugdi weyn gelisey sinaanta iyo garsoorka Soomaalida. Sharci ku yimid heshiis ka dhashay wakiilada shacabka ama garyaqaanada maxkamada dastuurka oo loo soo xulay in loo xilsaaro dhowrista xeerarka dastuurka iyo sharciyada ku abtirsada ma suurtowdo iney si xun u adeegsadaan madax guuldareysatay, laakiin waxaa suurtogal ah madaxdu iney si qaldan u adeegsadaan aragtida ka soo jeeda qanuunada isdabamarsan oo sababta u ah fashilka ah in cidii doonta sidey doonto u fasirato.
Meeshii laga sugayey isbedel dib loogu habeeyo ku dhaqanka sharci wanaagsan iyo xaqsoor dhexdhexaada oo ka dhaqangala garsoorka dowlada Soomaaliyeed, ayaa waxaa lagu baraarugey qas siyaasadeed oo ay horkacayaan xildhibaanada baarlamaanka, suxufiyiinta oo ay soo xirtaan madaxda dowlada, warbaahinta madaxabanaan oo la burburiyo iyo milkilayaashooda oo amar madaxtooyo lagu soo xiro, dhibanayaasha ah haweenka la kufsaday oo xukun xabsiya loogu darao kufsiga loo geystey. Haddii dastuurka iyo sharciyada dalka u degsan aysan lahayn daldalool waaweyn, suurtogal ma noqoteen in hogaanka dowlada dhaqanka shaqsiyadooda la raaco. Marka la waayo sharci wanaagsan ee loo noqdo waxaan la hureyn in madaxda dalka sida ay doonaan looga daba xadreeyo.
Ra’isulwasaare ayaa banaanka soo dhigay khilaaf kala dhexeeya madaxweynaha, wuxuuna cadeeyey in ismaandhaafkoodu uu salka ku hayo kala xadeynta waajibaadka madaxweynaha iyo ra’isulwasaaraha, wuxuuna codsi u soo jeediyey baarlamaanka iney soo kala dhexgalaan oo ay dastuurka xeerarkiisa ku kala saaraan, si aysan dib dambe u dhicin isqabsi salka ku haya howlgudashada ay kala leeyihiin labada masuul. Jawaabtii baarlamaanka waxey noqotay mid ku ridey wajigabax dhamaan shacabka Soomaaliyeed, farrintaas oo u muuqatay in baarlamaanka uusan hayn dastuur rasmiya oo uu u cuskan karo kala saarida wajibaadka madaxda dowlada. Taas waxaa ka siidaran in lagu eedeeyey ra’isulwasaaraha waxqabad la’aan ka dhalatay howlgudasho la’aan. Markii uu codsaday inuu baarlamaanka hor yimaado si uu isaga difaaco eedeynta keligiis la huwiyey, jawaabtu waxey noqotay: waad xukuman tahay maxkamad la’aan ee armey kuu roon tahay adiga oo aamusan inaad heysatid doodaada. Meesha uu ka waayey ra’isulwasaare in uu helo xaqsoor dhexdhexaada, maxaad u maleyneysaan iney kala kulmeyso gabar da’ yar oo la kufsaday. Ha ka yaabin in dowladan laga helo garsoor cadaalada oo madaxbanaan.
Waxey UN tirokoob ay sameysay ku sheegtay sannadkan in ku dhowaad 800 oo haweena ay diwaangeliyeen iney la kulmeen kufsi, sidaas oo ay tahay ayeysan gabdhuhu ku dhiiraneyn iney soo gudbiyaan kufsiga loo geysto. Gabar Soomaaliyeed oo 19 jir ah ayaa dhowaan ku dhiiratey iney ka hadasho kufsi ay u geysteen laba ka mida shaqaalaha dowlada oo mid kood loo maleynayo inuu ka tirsan yahay ciidanka sirdoonka dowlada. Halkii laga sugayey eedeysanayaasha iyo dhibanaha in lagu wada sameeyo baaris la xiriirta dhacdada kufsiga, ayaa waxaa hubaal noqotay dhibanihii in xabsi loogu daray kufsigii loo geystey, taasna waxaa u sii dheer ineysan awood u lahayn qareen si gaara u difaaca xuquuqdeeda. Sida muuqata waa ay adag tahay in cadeyn loo helo gabdhaha la afduubto oo sida wadarta ah loo kufsado. Gabadhaas dacwad uma aysan geysan dowlada oo cadaalad in wax loogu qabanayo ma aysan qabin, laakiin dacwada lagu soo oogey waxey ka turjumeysaa xanuunka dareenkeeda oo ay dibeda soo dhigtay. Cadaaladdarrida lagula kacay gabadhaas waxaa u sii dheer in la duudsiiyo xaqa ay u leedahay si xora iney u cabirto dhacdada foosha xun ee nafteeda lagula kacay. Kufsiga shaqaalaha dowlada ay kula kacaan haweenka Soomaaliyeed waa mid si toosa u taabaneysa madaxda hogaamineysa dowlada oo inta badan dadaalkoodu ku dhamaado in saxaafada laga af xiro haweenkaas dhiban. Meesha gabar da’ yar inta lagu kufsaday haddana loogu daray xabsi, ma kula tahay saxaafada oo meheradoodu tahay hirgelinta xoriyada hadalka iney ka badbaadeyso caburin, cagajugleyn, iyo xarig lagu barayo awooda qaldan oo ay leeyihiin madaxda wax ku barbaarinaysa cadaalad xumida.
Weriyihii warsaday gabadha la kufsaday oo dhacdadaas xanuunka badan u soo gudbiyey caalamka ayaa muteystay in laga qaado xoriyadiisa suxufinimo, waxaana lagu eedeeyey inuusan goobjoog u ahayn kufsiga, sidaasna uu adduunka ugu tebiyey dhacdo uusan hubin. Taas waxey xoriyada akhbaarka ku soo kordhineysaa inaan cidna laga warsan wixii ku dhacay ama aan la tebin wararka aan goobjooga loo ahayn. Dowladu waxey meel ka dhac ku sameyneysaa xoriyada ay Soomaalidu u leedahay iney helaan wararka ka hadlaya eedeymaha loo soo jeedinayo madaxda dowladooda si ay ula socdaan kartixumada ka jirta guddaha dowlada. Waxaa la quusinayaa waa weriyeyaasha ka shaqeeya warbaahinta sida gaarka loo leeyahay, kuwaas oo inta badan lagula kaco tacadiyo ka dhana xoriyada saxaafada. Haddii suxufiyiintu weyso xaqa cadaalada ee xoriyada hadalka waxaa loo jeeda waa in la xadido ganacsiga warbaahinta iyo in la dhantaalo maalgelinteeda, laguna qasbo milikilayaasha warbaahinta in hantidooda ay ka iibsadaan kooxda yar ee sida gaarka ah dowlada u maalgashata.
Warbaahinta Shabelle ayaa dowlada waxaa ka soo gaarey waxyeelo lagu burburiyey qalabkeeda, waxaana milkiilaheeda loo xiray inuusan taageersaneyn aragtida kooxda ka talisa madaxtooyada oo hogaanka u haysa dowlada. Warbaahinta iney madaxbanaan tahay ka sokow waxey u dhisan tahay qaab shirkad, waxeyna sharciyada shirkaduhu qabaan in shaqsiyadaha iska leh shirkadaha aysan masuul ka ahayn dacwadaha laga tirsanayo shirkadaha oo loo baahan yahay wixii qalada in lagula xisaabtamo shirkadaha oo dowladu ay ruqsado sharciya siiso, kana qaadato dhaqaale badan. Milkiileyaasha shirkadaha haddii lagu eedeeyo iney yihiin mucaaradka dowlada, taas macnaheeda waxaa loo qaadanaya yaboohsi dhaqaale oo si qasaba looga qaadayo milkiileyaasha haddii kalena ay marar badan ka soo muuqan doonaan xabsiyada ciqaabta iyo goobaha lagu qaado xukunada xaqdarrada.
Xisbiga Dadka wuxuu ummada Soomaaliyeed uga tacsiyeynayaa xabaasha la geliyey garsoorka dowlada. Xaqsoorka wanaagsan wuxuu yahay indhaha nabada iyo astaanta gobonimada. Koox yar oo kelitalisa ayaa dooneysa iney qaataan xilalka awooda dowlada, waxeyna diidan yihiin in loo soo jeediyo wax eeda. Dulqaadkoodu wuxuu ku siman yahay inta loo soo jeedinayo dhaliil iyo in la arkayo aragtidooda aan fogeyn ee ku qotonta maareynta aan lahayn xisaabtanka, habraac la’aanta silsilada awooda kala sareysa, iyo dhaqanka qarsoon oo lagu maamulayo siyaasada dalka. Waxaa dhab ah ineysan ceebu u dhimaneyn oo cidii isku dayda iney toosiso oo rabta iney ku taageerto taagdarrada ay la tukubayaan ay u qorsheysan tahay iney horay u martaan oo ay u maleegaan dabin ay isaga reebaan. Waxay kooxdaas gudaha ku maran yihiin haweenka la kufsado, saxaafada, milkiilayaasha shirkadaha, iyo siyaasiyiinta mucaaradka. Sidoo kale dibeda waxey ku maran yihiin cidii wax ku soo baratay galbeedka ama horay u soo martay madaxda dowlada ama aqoon u leh dhaqanka kooxaha laga soo abaabulo wadamada bariga dhexe iyo shaqsiyaad gaara sida Jarat Chopra oo madax ka ah qeybta UNka u qaabilsan musuqa iyo madaxda maamulaya dowladaha ka dhisan gobolada oo aan raacsaneyn hogaanxumadooda. Ha ka yaabin in la helo garsoor u xaqsoora Soomaalida inta ay hogaanka heyso dowlada hadda jirta oo cid aan ka tirsaneyn kooxdooda aan u ogoleyn iney xataa hesho xaqa ay u leedahay si wanaagsan iney dalkeeda Soomaalinimo ugu dhex noolaato. Kooxdaas waxey hadda horseedeen iney dhinac isaga miiraan oo iska dhexsaaraan shaqsiyaadka sida muuqata ugu dhexjira oo aan ka tirsaneyn, waxaana sidoo kale muuqta saansaanka kalahufida xiliyada soo socda oo ay doonayaan iney hore-u-mariyaan kala haatinta ay la damacsan yihiin kuwa ku dhexmilan oo ka dhuumanaya dhagartooda.
Dr. Saciid Ciise Maxamud
Gudoomiyaha Xisbiga Dadka Soomaaliyeed
Ciidamo ka tirsan militariga dowladda Soomaaliya oo gaaray deegaannadii lagu dagaallamay ee bariga Jowhar
US, Chinese warships nearly collide in S. China Sea